मुख्य समाचार Archives - Page 763 of 772 - A complete Nepali news portal based on news & views
२ श्रावण २०७४, सोमबार ०९:२४ July 18, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २ साउन । मुलुककै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र आसपासका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नगरलाई अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनेलगायत मीठा कुरा गरेका छन्। कसैले ,स्मार्ट सिटी, स्याटेलाइट सिटी, त कसैले ‘मोनोरेल’ संचालन र फ्लाइओभर निर्माण, कसैले निशुल्क वाइफाईको व्यवस्थाजस्ता आश्वासन दिएर नगरलाई सुविधासम्पन्न बनाउने सपना बाँड्न भ्याइसके। तर, काठमाडौं महानगरपालिकाकै बासिन्दा धूवाँ–धूलो, हिलो र ढलबाट मुक्त […]
काठमाडौं, २ साउन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारका एक मन्त्रीले अहिलेसम्म पनि सरकारी निवास छाड्न मानेका छैनन् । ललितपुरकाे पुल्चाेकमा मन्त्रीहरुका लागि बनाइएकाे सरकारी निवास छाड्नै नमान्ने पूर्वमन्त्री हुन् जितेन्द्र देव । उनी प्रचण्डकाे प्रधानमन्त्रीत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकार विघटन भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाे पनि […]
काठमाडौं, १ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाण्डुको अवस्था महानगर भन्न पनि लाज लाग्ने रहेको जनाएका छन् । उनले आवश्यक परे थप बजेट दिन तयार रहेको भन्दै सडकका खाल्डाहरु तत्काल पुर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना बनाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएका हुन् । आईतबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा […]
काठमाडाैं, १ साउन । ‘एकछिन खेलेर आउँछु’ भन्दै जाने छोरीलाई सदाका लागि गुमाउनुपर्ला भनेर कुन बुबाआमाले सोच्लान्? तर, राजधानी काठमाडौंको नेपालटारमा अव्यवस्थित ढलका कारण झंकनाथ फुयाँल दम्पतीले शुक्रबार साँझ छोरीलाई सदाका लागि गुमाउनुपरेको छ। फुयाँल दम्पतीले आँखै अगाडि पुतलीझैं यताउति गरिरहेकी छोरी ११ वर्षीया विनितालाई गुमाउनुपरेको हो। स्थानीय युरेका माविमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत विनिता […]
काठमाडाैं, १ साउन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ । सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ। अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो। विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ। मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो […]
१ श्रावण २०७४, आईतवार ००:२० July 16, 2017 Nonstop Khabar
काबुल, ३१ असार । अफगानिस्तानका विभिन्न ठाउँमा गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा परी ७७ जनाभन्दा बढी लडाकू मारिएका छन् । देशभरी गत चौविस घण्टाको अवधिमा भएका कारबाहीमा अन्य २७ जना घाइते पनि भएको रक्षा मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ । “मृतकमध्ये १७ जना इस्लामिक स्टेट (आइएस) लडाकू रहेका छन् भने अरु सात जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ”– मन्त्रालयद्वारा जारी […]
काठमाडौँ, ३१ असार । देशभरका प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा खाली रहेका आठ आना जग्गामा करेसाबारी तरकारी खेती गर्दा रु. १० करोड ५० लाख आम्दानी लिन सकिन्छ । मुलुकभर ३५ हजार प्राथमिक तथा आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । आठ आना जग्गाका दरले हिसाब गर्ने हो भन्ने मुलुकभर ८७ हेक्टर अर्थात् एक हजार ७५० रोपनी जमिनमा करेसाबारी […]